स्टुडियोमै कुटिए ऋषि धमला, रामधुलाई गर्ने अतिथि को हुन् ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
स्टुडियोमै कुटिए ऋषि धमला, रामधुलाई गर्ने अतिथि को हुन् ?
चर्चित पत्रकार ऋषि धमला स्टुडियोमै कुटिएका छन्। अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा बोलाइएको एक अतिथिले उनलाई कुटेका हुन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत प्रसारित कार्यक्रममा धमलालाई लछार पछार गरिएको छ। जनता जान्न चाहान्छ’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलामाथि नै लछारपछार गरिएको हो।
जनता जान्न चाहान्छ, कार्यक्रममा बडादशैँको सन्दर्भमा ज्योतिषिलाई साक्षत्कार गर्न बोलाइएको थियो। प्रख्यात ज्योतिषि विहांग्मराज तिम्सिनाले धमलालाई लछारलपछार पारेका हुन्। कार्यक्रममा ज्योतिषि तिम्सिनाले देशको अवस्था र प्रधानमन्त्रीको भविष्यवाणी गरेका थिए। उनले शेरबहादुर देउवा छिट्टै नै प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने संकेत गरेका छन्।
त्यसैगरि, केपी ओलीनै देशको प्रधानमन्त्री हुनेसमेत तिम्सिनाले भविष्यवाणि गरेका छन्। कार्यक्रमको अन्त्यमा धमलाले आफूलाई पनि आशिर्वाद दिन भनेपछि ज्योतिषिले लछारपछार पारेका हुन्। एकाएक तिम्सिनाले धमलाको हात तान्दै मन्त्र पढेका थिए। ज्योतिषिले मन्त्र पढिरहदा ऋषि भने मुस्कुराईरहेका थिए। अहिले उक्त भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ।
यसैगरि, दशैंको मुखमा महानगरीय प्रहरी प्रभाव नागढुंगाका सबै प्रहरी हटाइएको छ। त्यहाँ कार्यरत् प्रहरी निरीक्षकसहित सबै जना प्रहरीलाई हटाइएको हो। चाडवाडको मुखमा कार्यसम्पादन लगायत कामकारबाहीलाई लिएर प्रहरी निरीक्षक त्रिभुवनसिंह थापासहित सबै जना प्रहरी कर्मचारीलाई कामबाट हटाइएको हो।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी मेट्रोले बुधबारदेखि लागू हुने गरी नागढुंगा प्रभागको सबै टोली फिर्ता गरेर प्रहरी निरीक्षक निरू दुवालको नेतृत्वमा नयाँ टोली पठाएको हो। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले भने, ‘चाडवाडको समयमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन र आन्तरिक गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि पुरानो टोली फिर्ता गरी नयाँ टोली पठाइएको हो।
सुवेदीका अनुसार अनुसार उक्त प्रभागमा नयाँ प्रहरी निरीक्षक निरु कटुवालको नेतृत्वमा टोली खटाइएको छ। प्रहरीले आन्तरिक गुनासो सम्बोधन, चाडवाडको समयमा आइरहेको गुनासो र प्रहरी आन्तरिक शुद्धीकरणको लागि नागढुंगाको टोली परिवर्तन गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए। नागढुंगा प्रभागमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ३३ जनाको दरबन्दी थियो।
नागढुंगा काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाका हो। नागढुंगा काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाका हो, गुनासो आएपछि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा रहेको टोलीलाई नै परिवर्तन गरिएको हो,’ सुवेदीले भने। नागढुंगा प्रभागबाट तानिएका सबै प्रहरीलाई मेट्रो मातहतका प्रहरी कार्यालयमा खटाइएको सुवेदीले जानकारी दिए।
यसैगरि, नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन जना पदाधिकारी थप गरेको छ। बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकले तीन जना पदाधिकारी थप गरेको हो । बैठकले तीन पदाधिकारी मनोनय गरेपछि पदाधिकारी संख्या २१ पुगेको छ। बैठकले हाल सचिव रहेका जगन्नाथ खतिवडालाई उपमहासचिव बनाएको छ।
यसअघि तीन उपमहासचिव रहेकामा अब चार महासचिव हुने छन्। त्यस्तै सचिवहरुमा गरिमा साह, जीवनराम श्रेष्ठ र भागवत विश्वासीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार यसअघि चार सचिव रहेकामा अब सात रहने छन् । बैठकले पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम राख्ने र यसका लागि कानुनी प्रक्रिया मिलाउने निर्णय पनि गरेको खतिवडाले जानकारी दिए।
बैठकले ३०१ केन्द्रीय सदस्यको नाम टुंग्याएको र केन्द्रीय सचिवालयले त्यसमा भोलि थप गृहकार्य गरेर पर्सि नाम सार्वजनिक गरिनेछ। बैठकले केन्द्रीय आयोगमा ३५ सदसय हुने, स्थानीय कमिटीमा ६ पदाधिकारी रहने, जिल्ला कमिटीमा आधारभूत संख्या १०१ हुने र प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रबाट ५ जना जिल्ला कमिटीमा रहने पनि निर्णय गरेको छ।
पोलिटब्युरो चाँडै गठन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। बिजय गुरुङको संयोजकत्वमा सम्पर्क समन्वय कमिटी गठन पनि भएको छ। त्यस्तै बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा प्रकाश ज्वाला, जगन्नाथ खतिवडा, गंगालाल तुलाधर र विजय गुरुङ रहेको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेको र भुसालकै नेतृत्वमा ११ जना सदस्य केन्द्रीय सचिवालय पनि गठन गरेको बताइएको छ।
यसैगरि, नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन जना पदाधिकारी थप गरेको छ। बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकले तीन जना पदाधिकारी थप गरेको हो। बैठकले तीन पदाधिकारी मनोनय गरेपछि पदाधिकारी संख्या २१ पुगेको छ । बैठकले हाल सचिव रहेका जगन्नाथ खतिवडालाई उपमहासचिव बनाएको छ।
यसअघि तीन उपमहासचिव रहेकामा अब चार महासचिव हुने छन्। त्यस्तै सचिवहरुमा गरिमा साह, जीवनराम श्रेष्ठ र भागवत विश्वासीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार यसअघि चार सचिव रहेकामा अब सात रहने छन्।
बैठकले पार्टीको चुनाव चिन्ह कलम राख्ने र यसका लागि कानुनी प्रक्रिया मिलाउने निर्णय पनि गरेको खतिवडाले जानकारी दिए। बैठकले ३०१ केन्द्रीय सदस्यको नाम टुंग्याएको र केन्द्रीय सचिवालयले त्यसमा भोलि थप गृहकार्य गरेर पर्सि नाम सार्वजनिक गरिनेछ।
बैठकले केन्द्रीय आयोगमा ३५ सदसय हुने, स्थानीय कमिटीमा ६ पदाधिकारी रहने, जिल्ला कमिटीमा आधारभूत संख्या १०१ हुने र प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रबाट ५ जना जिल्ला कमिटीमा रहने पनि निर्णय गरेको छ। पोलिटब्युरो चाँडै गठन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
बिजय गुरुङको संयोजकत्वमा सम्पर्क समन्वय कमिटी गठन पनि भएको छ। त्यस्तै बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा प्रकाश ज्वाला, जगन्नाथ खतिवडा, गंगालाल तुलाधर र विजय गुरुङ रहेको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरेको र भुसालकै नेतृत्वमा ११ जना सदस्य केन्द्रीय सचिवालय पनि गठन गरेको बताइएको छ।
यसैगरि, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। प्रदेशसभामा दुई तिहाइ सांसदको समर्थन पाएपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जानकी मन्दिर पुगेका छन्। बुधबार विश्वासको मत लिएपछि बिहीबार जानकी मन्दिर पुगेका उनले त्यहाँका महन्थको गोडा ढोकेर आशिर्वाद लिएका छन्।
मुख्यमन्त्री राउत महन्थ रामतपेश्वर दासको कार्यकक्षमै गएर आशिर्वाद लिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आशिर्वाद लिन पुगेका मुख्यमन्त्री राउतलाई महन्थ दासले माला तथा दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका छन्।
बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित सय जना सांसदमध्ये ७७ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए। २३ जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए। उनले सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० फुटेपछि मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिएका हुन् ।